TextMagic: Mashruuc Dhamaystiran oo Ganacsi Fariin Qoraal ah (SMS) | Martech Zone
TextMagic: Madal Fariin Ganacsi oo Dhamaystiran oo Muuqaal ah (SMS)
Monday, August 17, 2020 Monday, August 17, 2020 Douglas Karr
Hadday ahaan lahayd laba qodob xaqiijin ama sameynta boos celin, waxaan bilaabayaa inaan ogaado inaan aad ugu raaxeysanahay isticmaalka farriinta qoraalka (SMS) sidii aan ahaa dhowr sano ka hor. Uma maleynayo inaan keligey ahay… Macaamiisha iyo ganacsataduba ay aad ugu faraxsanyihiin dirista iyo helista fariimaha qoraalka halkii laga joojinayo wicitaanada taleefanka.
Arrinta jirta, in kastoo, waa sida loo maareeyo dhammaan isgaarsiintaas heer ganacsi. Taasi waa halka ay ka soo galaan barnaamijyada fariimaha qoraalka ahi. Iyada oo dhufto ee sida TextMagic, ganacsigu wuxuu u diri karaa ogeysiisyo, digniino, xusuusin, xaqiijin ah, iyo ololeyaal Suuqgeyn SMS ah oo ka baxsan hal adeegsi oo adeegsade ah.
Tirakoobka Farriinta Qoraalka
15.2 milyan oo farriin qoraal ah ayaa daqiiqad kasta loo diraa adduunka oo dhan
95% fariimaha qoraalka ah waxaa lagu aqriyaa 3 daqiiqo gudahood marka la soo diro
4.2 bilyan oo qof ayaa u soo dira farriimaha qoraalka adduunka oo dhan
90 ilbidhiqsi waa celceliska waqtiga jawaab celinta fariimaha qoraalka ah
75% dadku waxay doorbidaan dalabyada lagu diro qoraalka
Noocyada SMS ee Kobcinta Ganacsigaaga
Ku soo dir Qoraallada khadka tooska ah - Qoraal ugu dir shaqaalahaaga iyo macaamiishaada khadka tooska ah. Soo rar xiriiriyaha oo maamul liistada dhammaan koontadaada TextMagic.
Email ugu dir SMS - Qoraallada laga soo diro emaylka way fududahay. TextMagic wuxuu emaylkaaga u rogaa fariin qoraal ah oo uu galiyaa, jawaabaha oo dhan ka dib wuxuu ku yimaadaa emayl ahaan
SMS Gateway API - Isku xidhka albaabka TextMagic ee SMS-ka websaydhkaaga ama softiweerka adoo adeegsanaya aaladda SMS API oo kudar fariin qoraal ah shaqadaada ganacsiga.
SMS Software loogu talagalay PC & Mac - TextMagic Messenger waa barnaamij kumbuyuutar oo kuu oggolaanaya inaad fariin qoraal ah oo la bartilmaameedsaday u dirto dhagaystayaashaada, midba mar ama jumlo.
Wadahadal SMS Laba-Waji ah - U dir oo soo hel fariimaha qoraalka ah ee deg-degga ah ee qoraalka SMS-ka ee TextMagic. Waxay ku habboon tahay wada xiriirka fog ee shaqaalaha iyo macaamiisha.
Liisaska Qaybinta SMS - E-mayl loo diro cinwaanka liiska qaybinta ayaa isla markiiba loo gudbiyaa farriin qoraal ah dhammaan lambarrada mobilada ee ku kaydsan liiska.
Ku hel SMS khadka tooska ah - U adeegso nambarada SMS-ga ee qaaska ah ama la wadaago TextMagic si aad u hesho SMS gudaha ku soo gala oo aad uga jawaabto fariimahaaga qoraalka ah macaamiisha iyo shaqaalaha.
Caymiska Global Global - Ku gaadho macaamiishaada iyo shaqaalahaaga adduunka oo dhan adoo marin u leh in ka badan 1,000 shabakadaha moobiilka ee ku baahsan 200+ waddan.
App loogu talagalay macruufka & Android - Si dhakhso leh u dir una soo dir qoraallada SMS, samee liisasyo iyo xiriiro, ku maaree ololahaaga duulimaad adoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta.
Isdhexgalka SMS Zapier - U adeegso Zapier inaad ku xirto TextMagic barnaamijyada aad jeceshahay. Waa otomaatig fudud oo caawiya ganacsigaaga.
Hal Saxeex Ku-Xidhmaan Shirkadaha - Soo gal TextMagic adoo adeegsanaya aqoonsigaaga aqoonsiga aaminka ah si fududna u siiya xubnaha kooxdaada.
Xalka SMS ee Ganacsiga - Xalka shirkadaha waxaa ka mid ah diiwaanada xisaabinta, marin u helka doorka ku saleysan, iyo SSO oo ah qaar ka mid ah astaamaha kaa caawinaya inaad koro.
Daraasadaha SMS ee Uruurinta Jawaab celinta - Hagaajinta khibrada macaamiisha isla markaana ka hel ra'yi-celin qiimo leh adeegyadaada isla markaaba iyo dhagaystayaal kasta.
Xaqiijinta Laba-Xaqiiqo (2FA) SMS - Ku xaqiiji isticmaaleyaasha adoo adeegsanaya farriimaha qoraalka, macaamil heer sare ah oo aamin ah, kuna dar lakab dheeri ah oo ammaan ah barnaamijkaaga.
Raadinta Xamuulka & Xaqiijinta Lambarka - Aqoonso lambarrada taleefannada aan xaddidnayn iyo kuwa xambaarsan isla markiiba oo ka hel natiijooyin wanaagsan iyo heerarka gudbinta ee ololayaashaaga SMS
Raadinta emaylka & Xaqiijinta - Hubi xaaladda, gudbinta, iyo heerka halista cinwaannada emailka adoo adeegsanaya adeegga ansaxinta e-maylka TextMagic iyo API.
Ku Bilaabashada TextMagic Waa Fudud
Waxaad ku bilaabi kartaa saddex talaabo oo fudud. Samee koonto BILAASH ah, ku shub buundo horay loo sii siiyay oo bilow inaad dirto oo aad hesho qoraallada.
Samee Koonto Bilaash ah - Isku qor koontadaada bilaashka ah si aad u aragto naftaada sida ay u fududahay. Isku day dhammaan astaamaha oo isticmaal deyn bilaash ah si aad ugu dirto una hesho farriimo ku dhowaad meel kasta oo adduunka ah.
Dhibcaha Lacagta La Siiyey - Markaad diyaar u tahay inaad dirto farriintaada ugu horreysa, adeegso lacag-bixintayada deyn-bixinta ah ee fudud si aad u bixiso-sidaad u socoto (qandaraasyo la'aan, kharash qarsoon ama khidmadaha socda)
U dir & Hel SMS - U dir oo soo qaado SMS markasta oo aad u baahato annaga oo adeegsanaya is-adeegsiga fudud ee fudud. Waxay u fududdahay sida dirista emaylka ama SMS taleefankaaga.
Saxeex u noqo Koontada Tijaabada TextMagic ee Bilaashka ah
Shaacinta: Waxaan nahay a TextMagic Gacansaar
Tags: email ugu dir smsSMSSMS apisms madalfarriin qoraal ahfariin qoraal apimadal fariimaha qoraalkaqoraal maskaxeed
Dhis ama Iibso? Xalinta Dhibaatooyinka Ganacsi ee Softwareka saxda ah
GSTV: Macaamiisha Bartilmaameedka ah ee Mashiinka oo leh Khibrad Video Ku Saabsan Goobta